အပျေါယံတှကေို တကယျထငျခဲ့မိတာ … – Shinyoon
ဘယျနရောမှာမဆို ပှငျ့လငျးတတျတဲ့ ကြှနျမ သိပျကို တုံးအခဲ့ဖူးပါတယျ ကိုယျ့ကို အပျေါယံလေးဆကျဆံခဲ့ကွတာကို ကြှနျမ တကယျကွီးပြျောခဲ့မိတာလေ ပွီးတော့ တကယျကွီးတှယျတာခဲ့မိတာပေါ့ အခြိနျတနျရငျ ပုံစံအမှနျတှမွေငျရမယျလို့ဘယျတုနျးကမှ မထငျခဲ့ဘူး
ကိုယျ့ကို ဖကျထားတဲ့လကျက ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့အခါ ပိုပွီးနာရတတျတယျတဲ့ သခြောတာပေါ့ ကိုယျဘာဖွဈနလေဲဆိုပွီး စာနာတဲ့ပုံစံနဲ့ မေးကွတယျ ကိုယျဖွဈနတေဲ့အရာတှကေို ပွောပွမိတဲ့အခါ ကိုယျ့နောကျကှယျမှာ ကိုယျ့ကို ပွောစရာတှေ ရသှားအောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ပေးလိုကျမိတာပေါ့ ….
တခြို့က ကွငျနာခငျြယောငျဆောငျကွတယျ ငိုနတေဲ့မကျြရညျတှကေို သုတျပွီး တဈဘဝလုံးစာပဲ ကွငျနာတော့မလို ပုံစံမြိုးနဲ့ ကိုယျ့ဘဝထဲ ဝငျလာတတျကွတာလေ… ကိုယျတကယျခဈြမိသှားတဲ့အခါမှပဲ မဖွဈနိုငျလို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ မခဈြနိုငျတော့လို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ ကိုယျကို ပိုပွီးငိုစခေဲ့တာ …
အပျေါယံတှကေို အမှနျထငျခဲ့တဲ့ကိုယျပဲ သရောပါ ထပျပွီး နာကငျြရတာပေါ့ … အဲ့လို ခဏခဏဖွဈပွီးသှားတဲ့အခါ ယုံကွညျခငျြတာတောငျ အလုံးစုံ မယုံရဲတော့ဘူး … ဘာကွောငျ့လဲမေးရငျ ကြှနျမ လုံလုံလောကျလောကျ နာကငျြခဲ့ရပွီးပွီ… ထပျပွီးနာကငျြရမှာကို ကွောကျတတျလာပွီလေ …
ယုံကွညျရမှာကို ကွောကျတတျလာပွီ … အပျေါလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့အပျေါ ကောငျးပွပွီး နကျနကျနဲနဲနာကငျြရမယျ့ ဒဏျရာတှကေို ကြှနျမ ကွောကျနခေဲ့ပွီ …
အပေါ်ယံတွေကို တကယ်ထင်ခဲ့မိတာ …
ဘယ်နေရာမှာမဆို ပွင့်လင်းတတ်တဲ့ ကျွန်မ သိပ်ကို တုံးအခဲ့ဖူးပါတယ် ကိုယ့်ကို အပေါ်ယံလေးဆက်ဆံခဲ့ကြတာကို ကျွန်မ တကယ်ကြီးပျော်ခဲ့မိတာလေ ပြီးတော့ တကယ်ကြီးတွယ်တာခဲ့မိတာပေါ့ အချိန်တန်ရင် ပုံစံအမှန်တွေမြင်ရမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ဘူး
ကိုယ့်ကို ဖက်ထားတဲ့လက်က ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့အခါ ပိုပြီးနာရတတ်တယ်တဲ့ သေချာတာပေါ့ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုပြီး စာနာတဲ့ပုံစံနဲ့ မေးကြတယ် ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို ပြောပြမိတဲ့အခါ ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ့်ကို ပြောစရာတွေ ရသွားအောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ပေးလိုက်မိတာပေါ့ ….
တချို့က ကြင်နာချင်ယောင်ဆောင်ကြတယ် ငိုနေတဲ့မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပြီး တစ်ဘ၀လုံးစာပဲ ကြင်နာတော့မလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ထဲ ၀င်လာတတ်ကြတာလေ… ကိုယ်တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှပဲ မဖြစ်နိုင်လို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ မချစ်နိုင်တော့လို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကိုယ်ကို ပိုပြီးငိုစေခဲ့တာ …
အပေါ်ယံတွေကို အမှန်ထင်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ပဲ သေရာပါ ထပ်ပြီး နာကျင်ရတာပေါ့ … အဲ့လို ခဏခဏဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ယုံကြည်ချင်တာတောင် အလုံးစုံ မယုံရဲတော့ဘူး … ဘာကြောင့်လဲမေးရင် ကျွန်မ လုံလုံလောက်လောက် နာကျင်ခဲ့ရပြီးပြီ… ထပ်ပြီးနာကျင်ရမှာကို ကြောက်တတ်လာပြီလေ …
ယုံကြည်ရမှာကို ကြောက်တတ်လာပြီ … အပေါ်လေးတွေနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းပြပြီး နက်နက်နဲနဲနာကျင်ရမယ့် ဒဏ်ရာတွေကို ကျွန်မ ကြောက်နေခဲ့ပြီ …
ဂရုစိုကျခံခငျြတဲ့ ကြှနျမနဲ့ ပိုပွီးပဈထားတတျတဲ့ သူ …..